Fari-piainan’ny mponina : misy elanelana betsaka eo amin’ny samy faritra | NewsMada
Fari-piainan’ny mponina : misy elanelana betsaka eo amin’ny samy faritra
Misy elanelana betsaka ny fari-piainan’ny mponina eo amin’ny samy faritra. Raha nataon’ny Pnud ny fanadihadiana, tsy misy fiovana izay fahasamihafana sy elanelana izay hatramin’ny taona 2016.
Ratsy ny fari-piainan’ny mponina raha refesina amin’ny IDH (Indice de développement humain). Voalohany eto amin’ny Nosy ny faritra Ana­lamanga, 0,583, manaraka azy ny any Sava (0,573), sy i Diana (0,568). Ireo faritra sisa rehetra, latsaky ny 0,550 avokoa. Ratsy fari-piainana in­drindra ny any Ihorombe, 0,363. Sa­lanisa manerana ny Nosy, 0,521 ny taona 2018. Salanisa metimety kokoa amin’ny fari-piainan’ny olombelona anefa ny 0,634.
Maromaro ny singa jerena. Misongadina indrindra ny tsy fahasalamana sy ny faharatsian’ny fanabeazana, ny tsy fahazoana rano madio fisotro, ny tsy fisian’ny herinaratra, ny faharatsian-dalana. Misonga­dina avokoa ireo amina faritra 22, indrindra any amin’ny tontolo ambanivohitra. Singa na­voakan’ny Pnud ihany koa ny faharatsian’ny toeram-ponenana, ny taham-pahafatesan’ny zaza, ny manambady latsaky ny 18 taona. Eo koa ny tsy fahampian-tsakafo, ny fahapotehan’ny tontolo iainana, ny fitaterana ratsy, ny fitaovam-pifandraisana sy ny serasera lafo.
Fidiram-bola isan’olona ambany dia ambany, latsaky ny 1,90 dolara isan’andro ny fototr’ireo rehetra ireo. 77,8 % amin’ny Malagasy, miaina amin’io fahefa-mividy io avokoa. Manambara ny tarehimarika fa tsy mivoatra ny toekarena.